Saunada, dabaasha iyo wadaadada – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Sauna: qol heer kulkiisu sareeyo oo uumitaati ah si dhidid badani kaaga baxo. Hadaba halkaas looma oggola dhar in lagu galo lagamana maarmo oo qabawga ayaa fariisiniya dhiigaaga ( caafimaad xumo) balse Soomaalida waxa ay isaga xoogsadaan buumo in ay ku galaan. Qolkaas ayaa la fariisanayaa tiiyoo ay wada joogaan rag wax dhar ah aan wadan iyo qolyaha muslimiinta oo isaga xoogsada buumada. dadka meesha maamulaahina in kasta oo aanay laqi-karrin arrintaas haddana indhaha ka laabta waayo iyagu waxa aaminsanyihiin in jeermis uu ka dhalankarro buumada.
Taasi weyba roontahee waxaa bannaan-ka Saunada ku diyaarsan biyo qandiir ah marna daweysan marna kuu tuutujinya oo si siman ragga iyo dumarku ugu jiraan masaafo aad u yar iyada oo dharkuna markaan yahay xagga ragga buuma oo kali ah halka dumarkuna wataan Rajameeto iyo kastuumo. waxa ay sidoo kale wadaagayaan dabaasha oo iyaduna ah gooni. Aw-wadaad muxuu yeelay hadaba! isaga iyo garkiisiiba waxa ay la dabaasheen gabdhihii qaawanaa oo biyhihii daweysnaa ayuu lagalay dumarkii halka Sauwnadii uu la joogay rag qaawan.
waxaa lagu yiri bala kawarran wadaad, waadiga sidan u raaxeysanyee haddii xaaskaagu intaan oo kale sameyso oo dumar qaawan Saunada la gasho oo sida aad ula dabaalaneysid ay dhankeea ula dabaalato ragga? Afkiisii ayaa ku qallalay..سبحان الله
Hadaba odogu ma diin ayuu ilaalinayaa mise dhaqan tolow armuuse maseyrsanyahay!
Hadaba dhaqamada ceynkaas ihi waa mid ku badan wadaadada iyo taageerayaashood. waa dhaqan laba wajiilanimo dhammeeyay waa dhaqan laga soo min guuriyay carrabtii hore iyo tan maantaba. Markaas ayaad arkeysaa dad waxa nuucaas ah kaaga dhigaya diin! waxaa se u wacnaan laheyd in uu yiraahdo dhaqan-keenna ayaan oggoleyn beenba ha ahaatee waayo dhaqankeennu gooni uma oggola in ninku sidaa yeelo.
Bahdilaadda hablaha iyo mar waliba waxa ku saabsan noloshooda in uu ka tarjumo wadaad ama xitaa ninkeeda iyada oo aan la qiimeyn waxa ay doonayaa ama dhibsanyaa waa arrin dunidu ka hulleeshay balae Nas diini ah iyo wadaad ku qallalay kusoo haray.
Dumar-ku waa bani aadan innaga oo kale ah u hun-baaleynta iyo u maamulidda sida caruurta oo kale, waa in aan ka gudubnaa dumarkuna fahmaan danaha ragga ee markasta diinta laga dhigo si looga horeeyo nolosha oo idil loona soo daliishado Nas u xanaaqsan sida ninkii daliishanaya! si ay danahooda ugu gaaraan. waxaan se shaki ku jirrin in ina ragaw hooyadaa, walaashaa, xaaskaaga iyo gabadhaadu aanay kaa mudneyn in aad ugu itaal sheegato dhaqan gurracan oo marna min-guuris ah marna cadaaladdu ka marrantahay.
Abdirisak Moalim Ahmed.